I-OEM Differential Pressure Constant Temperature Mixed Water Center ifektri kanye nabaphakeli | Wandekai
Isikhungo samanzi esihlanganisiwe sisebenza ezinhlelweni zokufudumeza zangaphansi. Ixuba amanzi okushisa aphakeme ohlangothini lokufudumeza amanzi namazinga okushisa aphansi avela emanzini okushisa afudumele.
Valve I-valve yokukhipha: ukukhipha okuzenzakalelayo ukugcina uhlelo luzinzile.
Lim lokushisa umkhawulo: Lapho uhlelo ifinyelela lokushisa ukulungisa iphutha lokushisa umkhawulo, ayeke nokuxhuma futha amanzi
Valve Ivelufa yengcindezi ehlukile: gcina ukuzinza kwangaphakathi kohlelo futhi uvikele uhlelo
Valve I-valve yeThermostatic: lungisa izinga lokushisa elidingekayo futhi ugcine ukushisa okungaguquki
Valve Drain valve: elula ukukhishwa kwendle ukuze uthole ukusebenza okungcono
Zone Indawo yokumpompa amanzi: ukulungiswa kwamazinga ama-3 kwamazinga ahlukahlukene okududuza.
⑦ Thermometer: bonisa izinga lokushisa langempela, likuvumela ukuthi ulawule ukusetshenziswa kohlelo
Ngaphambi kokuba idivaysi yokuxuba amanzi ishiye ifektri, i-valve yokuxuba amanzi ye-thermostatic, umkhawulo wokushisa, ingcindezi yokudlula ingcindezi yamandla, namandla wepompo wamanzi abekwe njalo; Ngokwesimo sangempela esisebenzisayo, Ungenza futhi ukulungisa iphutha okuyisisekelo ukuthola umuzwa ongcono womkhiqizo.
I-2.Idivayisi yokuxuba amanzi kufanele ifakwe endaweni ene-drain floor; ilungele ukunakekelwa esikhathini esizayo, ukulungiswa nokufakwa esikhundleni, futhi igwema ukudala ukulahlekelwa kuwe.
Umshini wokuxuba amanzi kufanele ufakwe futhi ulungiswe iphutha ngabachwepheshe be-HVAC; Uyacelwa ukuthi ukhethe izinto ezihambisanayo ukuxhuma okokusebenza, uhlelo lokungena lwamanzi nohlelo lokubuyisa ngeke lusebenze uma lufakwe ngenye indlela.
Ikhwalithi enhle kakhulu Isethi yokuklanywa komkhiqizo nentuthuko, ukukhiqizwa nokuthengiswa nokuhwebelana njengenye yebhizinisi le-valve (amapayipi)
Langaphambilini Brass PEX esishelelayo Onengqondo